Ciidamada Koonfurta Kuuriya oo sii joogaya Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada Koonfurta Kuuriya oo sii joogaya Soomaaliya
Guddiga Difaaca ee Baarlamanka Koonfurta Kuuriya ayaa ansixiyay in la kordhiyo waqtiga ciidamadeedu ay sii joogayaan Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta (UAE)
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddiga difaaca ee Golaha Shacbiga ayaa jimcihii ansixiyay kordhinta unugyada milatariga Kuuriyada Koonfureed ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta (UAE).
Gudiga baarlamaanka waxay u dhiibeen codsigooda dowlada si loo kordhiyo howlgalada dibadda ee la dagaallanka burcad-badeedda (Cheonghae) ee Soomaaliya iyo qeybta gaarka ah ee ciidamada gaarka ah ee AKHAK ee Imaaraatka ilaa dhamaadka sanadka 2021.
Kuuriyada Koonfureed ayaa xeebta Soomaaliya gaysay 300 oo xubnood oo ka tirsan kooxda CHEONGHAE tan iyo sanadkii 2009 taasoo qayb ka ah ka qayb qaadashada dadaallada caalamiga ah ee wax looga qabanayo burcad-badeedda ku sii baahay gobolka. Meelaha howlgalkooda loo kordhiyay muddada wuxuu ka kooban yahay Gacanka Cadmeed iyo Marinka Hormuz.
Cutubka AKH-ka oo ka kooban 150-koox ayaa waxay gacan ka geysanayeen tababarada ciidamada gaarka ah ee Imaaraatka tan iyo sanadkii 2011.
Howlgalinta dibedda ayaa la cusbooneysiiyaa sanad walba iyada oo loo marayo ansixinta baarlamaanka. Kordhinta waa in lagu ansixiyaa kalfadhiyada Golaha Shacbiga si loo ansixiyo kama dambaysta ah.
Tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii milatariga soomaaliya waxaa bad iyo barriba soo buux dhaafiyay ciidamo ajaanib ah oo danahooda gaarka ah in ay fushadaan u yimid dhulka Soomaaliya, dhammaan dowladihii dhismay burburka kaddibna ma jirto dowlad kala xaajootay waddamadaas sii joogitaanka dhulka Soomaaliya, iyo sidoo kale ujeedooyinka ay ka leeyihiin dhulka umadda Soomaaliyeed.